अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा भन्छिन्ः यो... :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा भन्छिन्ः यो समय फेरि बिताउँछु भने पनि फर्केर आउँदैन!
सबिना श्रेष्ठ काठमाडाैं, वैशाख २३
सिर्जना सुब्बा र उनका छोरा।
धेरैले लकडाउनमा बन्दीजस्तो महशुस गरिरहँदा अभिनेत्री सिर्जना सुब्बालाई अलि सजिलो छ। मंसिर ४ गते छोरा जन्मिएदेखि उनी घरै बसिरहेकी थिइन्। घर बस्न उनलाई बानी परिसकेको छ।
'मलाई त यसै पनि लकडाउनजस्तै थियो। कहीँ जान पाइने होइन। एक खालको नियमित तालिकामा छिरिसकेकी थिएँ,' उनले सेतोपाटीसँगको टेलिफोन वार्तामा भनिन्, 'नानीले गर्दा समय कटाउन सजिलै छ।'
सिर्जनाको छोराको नाउँ मिङ्सोसाम हो। लिम्बू भाषामा यसको अर्थ सुवासिलो वा भाग्यशाली हुन्छ। कोरोना महामारी सुरू भएपछि आफ्नो दैनिकीभन्दा मिङ्सोसामको स्वास्थ्यको बढ्ता चिन्ता भएको सिर्जना बताउँछिन्।
'छोरा नभइदिएको भए यसो बाहिरतिर निस्कन्थेँ पनि होला, तर बच्चा भएपछि अलि बढी सतर्क हुनुपरिहाल्यो,' उनले भनिन्, 'नदेखिने कोरोना कसैगरी घरभित्र छिरेर छोरालाई असर गर्‍यो भने!'
सहरबाट अलि टाढा भक्तपुर, सिर्जनानगरमा छ सिर्जनाको घर। उनी घरै बसे पनि परिवारका सदस्य रासन र तरकारी किन्न पसल जान्छन्। यस्तो बेला आफ्नाकै बुइ चढेर सुटुक्क कोरोना छिर्ला कि भनेर उनी डराउँछिन्।
बेलायतमा रहेकी आफ्नी जेठानीलाई कोरोना लक्षण देखियो भन्ने सुनेपछि उनको चिन्ता बढेको थियो। अस्पतालमा काम गर्ने उनकी जेठानीलाई निको भइसकेको उनले बताइन्।
हिजोआज उनको घरमा चार बालबालिकासहित १२ जना छन्। साना केटाकेटी दिनैभरि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। हाम्रो फोनवार्ताको बीचमा पनि केटाकेटीले धेरैचोटि हैरान पारे। उनले तिनलाई हप्काउँदै भनिन्, 'हेर्नु न, साह्रो दिमाग खराब गर्छ हो। तीन-चार वर्षका भएपछि त झन् सम्हाल्नै गाह्रो पो हुँदो रहेछ हगि!'
सिर्जना सुब्बा र छोरा। तस्बिर स्रोतः सिर्जना सुब्बा
अरू बेला आफू, श्रीमान, बच्चा र जेठाजु मात्रै घरमा भए पनि अहिले आफन्तीहरूले घर भरिएको छ। लकडाउनले उनीहरू आफ्नो थलो फर्किन पाएका छैनन्। श्रीमान पदम पनि बेलायत फर्किन नपाएर घरै छन्। सिर्जना र छोरालाई उतै लग्ने कागजात मिलाउन केही महिनाअघि आएका थिए, लकडाउनले यतै फसे। यसले सिर्जनालाई श्रीमानको साथ भने मिलेको छ।
करिब छ महिनादेखि लकडाउन तालिकामै अभ्यस्त भए पनि उनको सिर्जनात्मक गतिविधिमा असर भने पुगेको छ। फेरि उनको त स्वभावै काम गरिरहनुपर्ने।
अभिनयको लत बसेकाले सिर्जनाले छोरा गर्भमै छँदा अनुप बराल निर्देशित नाटक 'महाभोज' मा काम गरेकी थिइन्। २८ कलाकार सहभागी उक्त नाटक सानोतिनो उत्सवसरहै थियो।
'महाभोज' मा एक निडर र जुझारू पात्र इन्सपेक्टर चाम्लिङको भूमिकामा थिइन् सिर्जना। यो नाटक लिएर भारतको राष्ट्रिय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) जाने दिनसम्म उनको छोरा डेढ महिनाको भइसकेको थियो। अरू साथीहरू रेलबाट, उनी चाहिँ जहाजमा नयाँदिल्ली जाने तयारी थियो।
अन्तिम समयमा कोरोनाकै कारण निर्णय बदल्नुपर्यो। उनको भूमिका अभिनेत्री दिया मास्केले गरिन्।
त्यो समय नेपालमा कोरोना देखा नपरे पनि चीनमा महामारी सुरू भइसकेको थियो। एयरपोर्टबाट ओहोरदोहोर गर्दा संक्रमणको जोखिम थियो। 'आफ्नो लागि नभए पनि छोरालाई सर्ला भन्ने डरले जाने तीन दिनअघि मैले क्यान्सिल गरेँ,' सिर्जनाले भनिन्।
कोरोनाले नाटक लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई निकै असर पुर्‍याएको छ। सामाजिक दुरीको क्रम लकडाउनपछि पनि केही समय हट्नेवाला छैन। यसले दर्शकलाई थिएटरसम्म तान्न गाह्रो पर्ने रंगकर्मीहरूको चिन्ता छ।
मण्डला नाटकघरका लागि अबका दुई वर्ष विशेष थियो। मण्डलाकी वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेकी सिर्जना र अन्य मण्डलाकर्मीहरू नयाँ वर्षदेखि नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना बुन्दै थिए। मण्डलाको स्पेस र गतिविधि फराक बनाउने सोच थियो।
'एक हिसाबले काम सुरू भइसकेको थियो,' सिर्जनाले भनिन्, 'हामीले लिजमा लिएको मण्डला स्पेसको समय दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसबीच धेरै काम गर्नुपर्थ्यो। फिल्म‍ त आउँछन्, आउँदैनन् निश्चित हुन्न। हामी नाट्य क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउन चाहन्थ्यौं। कोरोनाले अब सबै योजना पछाडि धकेल्नुपरेको छ।'
कामबाहेक उनले सबभन्दा 'मिस' गर्ने ट्रेकिङ र हाइकिङ हो। नयाँ ठाउँले दिने ताजापना सम्झिँदै कहिलेकाहीँ उनको दिमागमा सोच आउँछ – एकदुई जना साथी भयो भने पालैपालो बच्चा बोकेर कसो हिँड्न नसकिएला!
यस्तो सोच आउँदा जंगलमा भुतप्रेतले लखेट्ला भन्ने पिर पनि लाग्छ। यस्तो पिर पहिले थिएन। उनको एउटै अन्धविश्वास थियो- मंगलबारका दिन गरेको काम फाप्दैन। मंगलबार उनका धेरै काम बिग्रेकाले सकभर नयाँ काम थाल्दा अरू नै दिन रोज्थिन्। पछिल्लो समय उनलाई स-साना अन्धविश्वासले पछ्याउन थालेको छ।
'बच्चाको मायाले हो कि!' उनले भनिन्, 'अलिकति साइकोजस्तो हुँदो रहेछ। बुटी बाँध्यो भने रुन कम हुने, धामी लायो भने ठीक भएजस्तो लाग्ने हुन थालेको छ।'
बच्चाका कारण उनले किताब पढ्न पाएकी छैनन्। घरि तल घरि माथि गर्दा र बच्चा स्याहार्दैमा दिन जाने बताउँछिन्, 'बरू बच्चा पेटमा भएको बेला निकै पढेकी थिएँ।'
फिल्म भने समय मिलाएर राति १२-१ बजेसम्म हेरिबस्छिन्। हिन्दी, चिनियाँ र मद्रासीसँगै इरफान खान बितेपछि उनका सबै फिल्म खोजेर हेरेको सिर्जनाले बताइन्। बलिउड निर्देशक प्रकाश झा नेपाल आएका बेलाकाे अन्तर्वार्ताबाट प्रभावित भएर उनका फिल्म पनि खोजीखोजी हेरिरहेकी छन्।
'समाचारले नै मान्छेलाई कस्तो कस्तो बनाइरहेकाले यो समय ध्यान दिएर किताब पढ्न सकिन्न होला। फिल्म भने हेर्न सकिने रहेछ,' उनले भनिन्।
कलाकारहरूले मनोरञ्जन मात्र होइन, काम सिक्न, सामाजिक मुद्दा बुझ्न र पात्र प्रवृत्ति केलाउन पनि फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा भने खासै सक्रिय छैनन्। आफूले गरेका एक-एक गतिविधि सेयर गर्न उनी रूचाउँदिनन्। आफूले गरेका फिल्म र नाटकबारे दैनिकजसो लेखेर विज्ञापन गरिरहनुपर्छ जस्तो पनि उनी ठान्दिनन्।
'यस्तो गर्दा उल्टै असहज महशुस हुन्छ,' उनले भनिन्, 'चुपचाप बसेर अरूले कहाँ के गरिरहेका छन् हेर्न भने रमाइलो लाग्छ।'
उनले अगाडि भनिन्, 'पहिले पहिले म ट्रेकिङ गएका फोटा धेरै सेयर गरिरहेकी हुन्थेँ। अचेल लकडाउनले दिमागै ह्याङ बनाइरहेका बेला मनोरञ्जन होस् भनेर बच्चाकै फोटा सेयर गर्छु।'
सिर्जना सुब्बा, उनका श्रीमान र छोरा। तस्बिर स्रोतः सिर्जना सुब्बा
सिर्जनाले पछिल्लोपटक छोराको पास्नीको फोटो हालेकी थिइन्। लिम्बू परम्पराअनुसार पाँच महिनामा छोराको पास्नी गरिएको थियो।
उनले आमा बन्दाको केही अनुभव पनि हामीसँग बाँडिन्। उनको वजन १५ किलो बढेर ७० किलो पुगेछ।
'छोरालाई छ महिनासम्म बाहिरको खानेकुरा नखुवाऊँ भनेर दूध मात्रै खुवाइरहेकी छु। त्यसका लागि आफ्नै खुराक बढाउनुपरेको छ। छोरालाई दूधको मात्रा पुर्‍याउन दिनहुँ मासु र गुलियो खानेकुरा खान्छु,' उनले भनिन्, 'केही समयपछि 'वर्कआउट' गर्ने सोच बनाएकी छु।'
धेरै कलाकार आमा बन्दा मोटाएको र ज्यान बिग्रिएको भनेर दु:खी हुन्छन्। सिर्जनालाई त्यसको चिन्ता छैन। बरू वास्तविक जीवनको यो नयाँ भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न पाएकोमा उनी सन्तुष्ट छिन्। नाटक र फिल्ममा नयाँ भूमिकाको अनुभव बटुल्दा पनि उनको मन यसैगरी सन्तोषले उज्यालो हुन्थ्यो।
सिर्जनालाई अब फेरि रंगमञ्च र फिल्म क्षेत्रमा फर्कन केही समय लाग्ला। पहिले त तीन-चार महिनापछि नै काम गर्न सकिएला भन्ने सोचेकी थिइन्।
अहिले बुझ्दैछिन्, 'आमा भएपछि बच्चाको बढी सुर्ता हुँदो रहेछ। उसका बारेमा गहिरिएर सोच्ने बनाउँदो रहेछ। फेरि श्रीमान पनि बाहिर जानुपर्ने भएकाले सबै एक्लै गर्नुपर्छ। दुई-चार वर्ष त काममा फर्कन गाह्रै हुन्छ होला।'
यसबीच रंगमञ्चलाई सम्झेर दुःखी हुनुभन्दा उनी आमा बन्दाको सुखद अनुभूति गर्न चाहन्छिन्। हरेक काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने र त्यसमा रमाउने खुबी कला क्षेत्रले नै सिकाएको उनी बताउँछिन्।
भन्छिन्, 'मैले मेरो करिअरलाई सक्दो समय दिएकी थिएँ। यो मेरो बच्चा हुर्काउने समय हो। कामका लागि आमाको जिम्मेवारी छाडेर हिँडे भने उसको पनि अधिकारको कुरा आउँछ। यो समय फेरि फेरि बिताउँछु भनेर फर्किएर पनि त आउँदैन।'
उनले अन्तिममा भनिन्, 'जिन्दगी रंगमञ्च हो भने अहिले म आमाको भूमिकामा छु।'
बुद्धिसागरको लकडाउन खोज- जसका लागि गल्ली गल्ली भौंतारिन्थेँ, त्यो घरमै पाएँ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २३, २०७७, १९:४०:००